Nhau - Hong Kong Yepasi Pose Kudhinda uye Packaging Exhibition
Hong Kong Yepasi Pose Kudhinda uye Packaging Exhibition
Yechinomwe Hong Kong Yepasi Pose Kudhinda uye Kuteedzera Exhibition inzvimbo yepamusoro uye isingawanzo imwechete-yekumira bhizinesi chikuva cheiyo indasitiri. Rave rave rakakosha zambuko uye hub inobatanidza kudhinda nekupakata sevhisi vanopa nevatengi vepasirese, vanopa rubatsiro uye vatengesi. Pano, varatidziri vachapa dzakasiyana siyana dzekudhinda nekurongedza mhinduro, izvo zvazvino zvigadzirwa nemidziyo, pamwe ne logistics services, nezvimwewo kupa vatengi kubva kumarudzi ese ehupenyu vanoda kudhinda nekupakata masevhisi kupa rakapfuma sarudzo yemhinduro, kubatsira mabhizinesi ekuvandudza mufananidzo uye runako rwezvigadzirwa, nokudaro achiwedzera kukwikwidza kwezvigadzirwa.
Iyo yakanaka inogamuchirwa zvakanaka neindasitiri, sezvazvinogona kuonwa kubva mukuwedzera kwakatsiga muhuwandu hwevanoratidzira nevatengi. Kubva 2011, chiratidziro chakakwezva vanopfuura 320 varatidziri vanobva kunyika sere nematunhu, kusanganisira Hong Kong, Mainland China, Germany, Korea, Philippines, Singapore, Thailand neTaiwan, inomiririra kuwedzera kwe22.8%. Nekubatsirwa kweiyi yepasi rose pudong inoshanda yekutengeserana nekusimudzira chikuva, varatidziri vanosvika kune vanogumisa-vashandisi, vanodhinda vamiririri, vaparidzi, vagadziri, kudhinda nekupakata makambani ebasa, vatengesi, vagadziri uye makambani ekugadzira mumaindasitiri akasiyana. Huwandu hwevatengi vakapinda gore rapfuura hwaive pamusoro pezviuru gumi nezviuru, kuwedzera kwe6.4%, uye vaiuya kubva kunyika zana nematanhatu.
Hongbang kurongedza zvakare kubuda, yakatarisana nenyika, yakatarisana nemunhu wese. Kungo kungokupa iwe sehunyanzvi sevhisi uye nemhando yepamusoro zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvedu zvinofukidza chikafu, zvemakemikari ezuva nezuva, mishonga, agrochemicals, zvemagetsi, zvekuvakisa uye mimwe minda. Yakazvitsaurira kune yakasimba yemhando yekudzora uye inofungisisa vatengi, vedu vane ruzivo vashandi vevashandi vanogara varipo kuti vakurukure zvaunoda uye nekuona kugutsikana kwako. Kunyangwe odha yako iri diki kana hombe, yakapusa kana yakaoma, ndapota usazeza kutaura nesu. Sevhisi yakanaka uye kugutsikana mhando inogara uinewe.
Post nguva: Nov-06-2020